एउटा चित्रमय शुरुवात
त्यतिवेला म गुल्मीको एरिया सेक्रेटरीका रुपमा कार्यरत थिएँ । एकदिन पार्टीको कामकै शिलशिलामा पश्चिम गुल्मीको अर्खावाङ्ग जानुपर्ने भयो । त्यहाँ बिशेष क्षेत्रवाट स्कुलिङ्ग विभागमा कार्यरत ६ जना कमरेडहरु आउनुभएको रहेछ । रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्युठान, दांग, अर्घाखाँची, कपिलबस्तु र गुल्मी गरी आठ जिल्ला मिलाएर बिशेष क्षेत्र बनाइएको थियो । आधार इलाका र प्रचार इलाकालाई मिलाएर बनाइएको बिशेष क्षेत्रमा कार्यकर्ताहरुको राजनैतिक र बैचारिक स्तर बृद्धिका लागि सो क्षेत्रको राजनैतिक व्यूरोले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सोही योजना अनुसार हामीलाई प्रशिक्षण दिनका लागि कामरेड विश्वास लगायतको क्षेत्रिय स्कुलिंग टिम गुल्मी आइपुगेको थियो ।
टिममा सल्यानका क.तिलक मल्ल क्षितिजको नेतृत्वमा प्युठानका क.वादलसिंह, दाङ्गका क.विश्वास, रुकुमका क.मुस्कान, रुकुमकै क.सौभाग्य र गुल्मीका क.मनोज गरी छ जना थिए । उहाँहरु खाना खान जान लाग्दा मैले सरसर्ती त्यो टोलीलाइ हेरेँ । मलाइ क. विश्वाससँग खास रुची लागिरहेको थियो । विश्वास भन्ने नामले मलाइ आकर्षित गरिरहेको थियो ।
त्यहाँ चिनाजानी गर्ने समय मिलेन । जिल्ला सेक्रेटरी सुदर्शन बराल उर्फ कुमार दाइसँग पुर्वी क्षेत्रको स्कुलिङ्ग कार्यक्रमको तयारीको लागि केही सल्लाह गरेर म फर्किएँ । पुर्वी क्षेत्रको स्कुलिङ्ग कार्यक्रम हँसरा गाविसको भण्डारवनमा हुनेभयो ।
हामी एकहप्ते कार्यक्रमको तयारीमा लागेका थियौं । स्कुलिङ्ग विभागका कमरेडहरुलाइ मैले नै रिसिभ गरेर भण्डारवन पुर्याउनुपर्ने भयो । म खैरेनी वजारमा उहाँहरुलाइ पर्खिएर बसेँ । खैरेनी वजारमा रहेको झोलुंगे पुलको मुखैनेर एउटा पिसिओ थियो । क.विश्वासले त्यहाँ कसैलाइ फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । क्षितिज दाइ पुलनेर यताउता टहलिरहनु भएको थियो ।
हेल्लो कमरेड लालसलाम । म आस्था, तपाईहरुलाइ लिन आएकी....... । म सरासर अगाडि बढेर क्षिंतिजदाइसँग हात मिलाउन खोजेँ । तर क्षितिज दाइ अकमकिनुभयो । उहाँ अलमल पर्नुभयो म सँग हात मिलाउन मान्नुभएन । उहाँलाइ के लागेछ भने म दुश्मनको कुनै एजेन्ट थिएँ र सिआइडि गर्दै त्यहाँ आइपुगेकी थिएँ । मैले विस्तारमै आफ्नो वारेमा बताएपछि मात्र उहाँहरु कन्भिन्स हुनुभएको थियो ।इन्चार्ज पारशमणी दाइ त्यहीँ खैरेनी वजारमै हुनुहुन्थ्यो । मैले टिमसँग भेट गराइदिएँ ।
स्कुलिङ्ग टिम भोकाइरहेको रहेछ । छिटै हिँड्नुपर्ने बाध्यता पनि छदै थियो । म टिमको लागि एकएकवटा समोसा लिन गएँ । आउँदा उनिहरु हिँडिसकेका रहेछन् । म पनि हातमा समोसाको पोको वोकेरै उकालो लागेँ । मसँग लिम्घा घरभएका एकजना सुरेश नाम गरेका कमरेड थिए ।
भण्डारवन पुग्न करिव ४ घन्टा जति उकालो हिँड्नुपथर््यो । म पुग्दा टोलीले खाना खाँदै थियो । विपना मेश कमाण्डर थिइन् । उनैले स्कुलिङ्गको टिमलाइ खाना खुवाउँदै थिइन् । वाटोमा भोक लागेपनि हातमा भएको समोसा खान मन लागिरहेको थिएन । म स्कुलिङ्ग विभागको एकजना सदस्य कमरेड विश्वासको वारेमा सोचिरहेकी थिएँ । एक्लै खान मन लागेन । कमरेडहरुले के सोच्लान भन्ने लाग्यो । ४ घन्टाको उकालो वाटो कमरेड सुरेशसँग खासै नवोलेरै चढेकी थिएँ मैले । मेरो मनभरी कमरेड विश्वासको अनुहार नाचिरहेको थियो ।
वेलुकी कमरेड विश्वाससँग केही कुरा गर्न मन लागिरहेको थियो । तर हाम्रो विचमा कुनै वोलचाल भइरहेको थिएन । यो शिलशिला उनले शुरु गरुन भन्ने म चाहन्थेँ तर उनले मलाइ वेवास्ता गरिरहेका थिए । भैगो, मैले आफ्नो मन भित्रको वोल्ने रहर मारिदिएँ । भोलीदेखी स्कुलिङ्ग कार्यक्रम शुरु हुनेवाला थियो । साथीहरु सवैतिरवाट आउने क्रम जारी थियो । हामी व्यवस्थापनमा खटिइरहेका थियौं । बिशेष क्षेत्रवाट आएको टिमले स्कुलिङ्ग दिनेवाला थियो । धेरै कुराहरु सिक्न पाइने कुराले मन यसैयसै रोमाञ्चित थियो । राती सुत्नु अगाडि फेरी कमरेड विश्वासको अनुहार मेरो मानसपटलमा नाच्न लाग्यो । बल गरेर म त्यो अनुहारलाइ वेवास्ता गर्दै निदाएँ ।
अर्को दिन निर्धारित समयमै स्कुलिङ्ग कार्यक्रम शुरु भयो । पहिलो दिन विश्वासको क्लास थिएन । अरुले आआफ्ना क्लास दिए । भोलीपल्ट मात्र विश्वासको पालो आयो । उनले आफ्नो मृदुल मुस्कानका साथ सेतो वोर्डमा कालो रंगको मार्कर पेनले लेखे– ‘शैन्यविज्ञान’ ।उनका अक्षर एकदमै चम्किला, उज्याला र मिलेका थिए । असाध्यै सुन्दर अक्षर लेख्ने उनको प्रस्तुती पनि निकै राम्रो थियो । म हेरेको हेर्यै भएकी थिएँ । दिउँसो चिया खाने समयमा म हत्त न पत्त विश्वास र मनोजको टिममा मिसिँए । विश्वास हल्का मुस्कुराए, मैले पनि मुस्कुराएरै उनको जवाफ दिएँ ।
मैले तिनवटा गिलास सफा गरेर ल्याएँ । पालैपालो तिनवटा चिया ल्याएँ र हामी तिनजनाले कुरा गर्दै चिया पियौं । मैले नै ति गिलास लगेर सफा गरेँ । जवकी म यसरी अगाडि सरेर कसैका गिलास वा थाल माझ्ने मध्येकी केटी थिइन । यसैपनि त्यो समयमा सवैले आआफ्ना भाँडा आफै माझ्ने चलन थियो । म विस्तारै विश्वाससँग आकर्षित हुँदै गइरहेकी थिएँ । तर यो कस्तो प्रकारको आकर्षण थियो । ठम्याइसकेकी थिइन ।
मलाइ उनकै वारेमा सोचेर बसिरहन मन लाग्थ्यो । उनलाइ आफूतिर आकर्षित गर्न मन लाग्थ्यो । उनि मसँग गफिइरहुन भन्ने लागिरहेको थियो । यहाँसम्मकी कार्यक्रम चलिरहेको वेलामा उनले मलाइ मात्र प्रश्न सोधिरहुन, अरु कोहीसँग नबोलुन जस्तो पनि मलाइ लागिरहेको थियो । यस्तो त कसैको वारेमा भएको थिएन ।
स्कुलिङ्ग चलिरहेकै वेला एकदिन विश्वासले एउटा दस्तावेज देखाए र भने सकेसम्म यो सवैले सारेरै राख्ने कोशिष गर्नुहोला । यो धेरै राम्रो दस्तावेज हो ।
मैले त्यो दस्तावेज मागेँ र रातभर लगाएर डायरीमा सारेँ । एक्लै सार्न सकिन्न कि भनेर मैले अरु तिनवटी जतिलाइ पनि एक एक पाना सारिदिन लगाएँ । भोलीपल्ट विहानै विश्वासलाइ लगेर वुझाइदिएँ । एकीना हाम्रो एरियाकी सेक्रेटरी थिइन् । उनले विश्वासको वारेमा कुरा गरिरहन्थिन् । विश्वास र एकीना गफिइरहेका देखिन्थे । त्यस्तो देख्दा मलाइ डाहा जस्तो लागेर आउँथ्यो । अन्ततः स्कुलिङ्ग कार्यक्रम समापनको दिन आयो । मलाइ औडाहा भएर आयो । अव कार्यक्रम सकिएपछि विश्वास पनि फर्किएर जानेछन् । हाम्रो भेट फेरी हुन पनि सक्थ्यो र नहुन पनि । चिठ्ठी लेख्नका लागि हामीसँग एकअर्काको ठेगाना पनि थिएन ।
विश्वासहरु जुन घरमा बसिरहेका थिए, त्यो घरको अगाडि सयपत्री फुल फुलिरहेका थिए । मैले विदाइको लागि माला तयार पार्नुपर्ने जिम्मा पाएकी थिएँ । फुल टिप्दै गर्दा मैले विश्वास आएर मसँगै फुल टिपिरहेको, हाँसेको कुरा गरेको कल्पना गरेँ । विश्वास त्यो घरभित्र बसिरहेका थिए । म वाहिर आफैसँग आन्दोलित भइरहेकी थिएँ । खासमा मैले उनलाइ एकतर्फी प्रेम जस्तो केही गरिरहेकी थिएँ । फुल टिपेर सकियो तर उनि घरवाट वाहिर निस्किएनन् । मेरो मुटु जोडजोडले हल्लिरहेको थियो । मेरो मुटुजस्तै वरपरका रुखबिरुवाहरु हावाको झोक्कासँगै हल्लिरहेका थिए । मलाइ चिच्याएर उनलाइ वोलाउन मन लागिरहेको थियो । कमरेड विश्वास म तिमीलाइ मायाँ गर्छु । मलाइ सारा दुनियाको अगाडि यस्तै भन्न मन लागिरहेको थियो । उनलाइ अंगालोमा कस्न मन लागिरहेको थियो ।
नैतिकताको कुन्नि कुन वन्धनले हो म अगाडि बढ्न सकिन । मेरा नौ नाडी गलेर आए ।जीवनमा आफूले मन पराएको मान्छे आज टाढा जाँदैछ । म उसलाइ रोक्न सकिरहेकी छैन । मैले उसलाइ मन पराउँछु भनेर पनि भन्न सकिरहेकी छैन । कस्तो विरोधाभास । त्यो वेलाको विरोधाभासपूर्ण अवस्था र मेरो विक्षिप्त मानसिकता सम्झिएर म आज पनि भावुक हुन्छु । संवेदनाको तरलतामा तैरिएर जव त्यो विगत सम्झिन्छु मन यसै यसै कुँडिएर आउँछ । मैले डोकोभरी फुल टिपेर सकेकी थिएँ । उ सँग मनभरीको एक नजर जुधाउनु थियो, मिलेन । म उसको नजिकै पुगेर पनि उसलाइ नदेखि फर्किएर आउनुपर्यो आएँ ।
मैले ६ वटा माला तयार पारेँ । मनमनै एउटा संकल्प जस्तो के गरेँ भने यदी मैले गरेको प्रेम चोखो प्रेम हो भने मैले उनेको यो सवैभन्दा राम्रो र केही लामो माला विश्वासको गलामा परोस । नभन्दै त्यो त्यस्तै भयो । त्यो माला विश्वासको गलामै पर्यो । मेरो खुशीको सीमा नै रहेन । कार्यक्रम सकियो । उनिहरु फर्किने भए । म पनि केही तल खैरेनी वजारसम्म सँगै आएँ । वाटोमा हामीले केही कुरा गर्यौं । मैले कुरैकुरामा फ्याट्ट सोधेँ–दाङ्ग कस्तो छ हँ ।
जाने हो र दाङ्ग, उसले पनि फ्याट्ट प्रतिप्रश्न गर्यो । कतै मेरो मनको कुरो उसले वुझेछ कि भनेर लाज र शरमले म झुकेकी थिएँ । विश्वासका सवै परिवार पार्टीमा लागेका रहेछन् । भाइ वेपत्ता रहेछन् । एउटी बहिनी गण्डक क्षेत्रको तनहुँ, अर्की बहिनी जनमुक्ति सेनामा र दिदी प्युठान जिल्ला पार्टीमा काम गर्दा रहेछन् । यो कुरा थाहा पाएर मलाइ उसको झनै मायाँ लागेर आयो ।
हामी खैरेनी वजारमा आइपुग््यौं । विश्वाससँग यहीँवाट छुट्नु थियो । मलाइ मुटु चुँडिन लागेजस्तो भएको थियो । उनले झोला वोकेर लमकलमक आफ्ना पाइला अगाडि बढाए । म हेरिरहेँ । न आइ लभ यु विश्वास भन्न सकेँ । न उनको ठेगाना नै सोध्न सकेँ । न हात समातेर नजाउ नै भन्न सकेँ । बश हात मिलाएर उनि गएको हेरिरहेँ ।
एकछिनको लागि म मुर्तिवत उभिइरहेँ । वोल्नै सकिन । के गर्ने कसो गर्ने सोच्नै सकिन । मैले जीवनमै पहिलोपटक प्रेमको अनुभुति गर्दै थिएँ । तर जस्लाइ प्रेम गरेकी थिएँ, उ मसँग पर ...पर... गइरहेको थियो । मेरो मुटु रोकिएला जस्तो भएको थियो । एउटा रोमाञ्चक अनुभुति गर्न नपाउँदै विछोडको तिक्तता भोग्नुपरिरहेको थियो ।
युद्ध चरम अवस्थामा थियो । संकटकालका नारकिय दिनमा थियौं हामी । के थाहा यो भेट अन्तिम भेट हुनपनि सक्थ्यो । उनिहरु कहाँ जाने हुन मलाइ केही पनि थाहा थिएन । बशः एउटै कुरा थाहा थियो कि म उसको प्रेममा परेकी थिएँ । यो कस्तो विडम्वना । जीवनमा मेरो लागि कति प्रेम प्रस्तावहरु आए ।कतिले प्रेम पत्र पठाए । मैले तिनलाइ कहिल्यै गम्भिर रुपमा लिइन । कसैको प्रेम प्रस्तावलाइ यस वा नो भनेर जवाफ दिन समेत आवश्यक ठानिन तर आज म यस्तो मान्छेको प्रेममा पागल भइरहेकी थिएँ जस्को वारेमा मलाइ केही पनि थाहा थिएन । उसको पृष्ठभुमि, उसको घरपरिवार वा उसको गन्तव्य । बस, म उसलाइ एकतर्फी प्रेम गरिरहेकी थिएँ ।
म खैरेनीको बिच बजारमा उभिरहेकी थिएँ । उ गएको वाटोतिरै हेरेर....। उसले छाडेका पदचापहरु पछ्याउँदै कुदेर उसलाइ भेटाउन मन लागिरहेको थियो । उसको हात समातेर उसलाइ फर्काउन र आफुसँगै राख्न मन लागिरहेको थियो । तर उ त ओझेल परिसकेको थियो ।
आँखाभरी आँशु लिएर म वाटोमा अलपत्र उभिइरहेकी थिएँ । क.सामना आएर मलाइ वोलाइन् । म झसँग भएँ । मेरा साथीहरु नजिकैको सेल्टरमा झोला विसाएर बजार तिर निस्किने तयारीमा थिए । मलाइ भने उसलाइ सम्झिएर रुन मन लागिरहेको थियो । नुहाउने निहुँ बनाएर पानीको धारो भएको ठाँउमा गएँ र कपडैसँग पानीमा थापिएँ । आखाँवाट आँशु बरबर खसिरहेका थिए । मुखवाट हिक्क हिक्क आवाज आउन थालेको थियो । धन्न म त्यहाँ एक्लै थिएँ ।
म मन लागेजति रोएँ, एकछिन पछि उठेँ र यसरी आफ्नो मन बुझाएँ । त्यो कुनै प्रेम थिएन, केवल एउटा सामान्य आकर्षण थियो । विपरितलिङ्गी प्रतिको स्वाभाविक आकर्षण । म एउटा महान उदेश्य लिएर क्रान्तिमा होमिएकी मान्छे । यस्ता झिना मसिना कुरामा अल्झिनु हुँदैन । यस्तै सोचेर म उठेकी थिएँ । प्रशस्त रोएकी पनि थिएँ । त्यसैले मन हल्का भएको थियो ।
खैरेनी वजारमा हाम्रो आउने जाने चलिरहन्थ्यो । प्रहरी चौकी उठिसकेका थिए । कहिलेकाँही गस्तीमा आउनुको अलावा सेना यता आउने हिम्मत गर्दैनथ्यो । त्यसरात त्यतै वसेर भोलीपल्ट आफ्नो एरिया अर्थात लुम्पेकतिर जाने योजना बनाएर हामी त्यसरात खैरेनीमै बास बस्यौं । तर विहानै अर्कै खवर आइपुग्यो ।
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)ले जिल्लाका अगुवा महिला कार्यकर्ताको लागि प्रशिक्षण भेला आयोजना गरेको थियो । सोही भेलामा सहभागी हुनका लागि छापहिले गाविसमा आउनु भन्ने खवर एकाविहानै आइपुग्यो । वाटोमा इन्द्रेगौंडा नाका क्रस गर्नुपर्दथ्यो । त्यहाँ आर्मीले व्यारेक नै खडा गरेर बसेको थियो । त्यसपछि तम्घास नजिकै पर्ने हुनाले मुसिकोट नाका पनि उत्तिकै खतरनाक थियो । रातारात नाका काट्नु कम जोखिमपुर्ण मानिन्थ्यो । तिनताका प्रायःजसो लामो यात्रा रातीमा नै गरिन्थ्यो ।
हामी रातभर हिँडेर भोलीपल्ट विहान छापहिलेमा रहेको कार्यक्रमस्थल पुग्यौं । त्यहाँ पुग्दा खाना खाने वेला भइरहेको थियो । कमरेड विश्वासले खाना खाएर थाल माझ्दै थिए । उनलाइ देख्न वित्तिकै मनको अन्तरकुन्तरमा कतै थन्काएको प्रेमिल भावना फेरी तरंिगत हुन थालेको थियो । मैले टाढै पुगिसकेहोलान भनेका स्कुलिङ्ग विभागका सवैजना त्यहीँ थिए । आज यतै वसेर भोली जाने उनिहरुको योजना रहेछ ।
एउटा गोठको भित्तोमा छेलिएर मैले विश्वासलाइ मनभरी हेँरे । पातलो शरीर, गहुँगोरो अनुहार, ओँठमा हर्दम नाचिरहने एउटा चिरपरिचत मुस्कान, आँखामा चश्मा, न अग्लो न होँचो ठिक्कको उचाइ, लरक्क कोरिएको वाल, घ्यु कलरको भुँइमा कतै कतै सुन्तला र कतै कालो कलरका धर्का भएको ज्याकेट । उ उस्तै थियो जस्तो अवस्थामा मैले बिदाइ गरेकी थिएँ ।
धेरैजसो कमरेडहरुले मसँग लालसलाम भन्दै हात मिलाउन आए । म चाहन्थेँ उ पनि मलाइ वोलाउँदै, परैवाट हात हल्लाउँदै आओस र दरिला हात चपक्क समातेर लालसलाम कमरेड आस्था भनोस भनेर म चुपचाप पर्खिरहेकी थिएँ । तर उ मसँग नवोलेरै हिँडिदियो, देखेको नदेख्यै गरेर । म फेरी पनि हेरेको हेर्यै भएँ । म पो उसलाइ मन पराउँछु त, उसले मलाइ मैले जस्तो नजरले हेरेकै छैन । धत पागल केटी । मैले आफूलाइ आफैले सम्भmाएँ ।
खाना खाएपछि कार्यक्रम शुरु भयो । महिला संगठनको जिल्ला कमिटी सचिव हुनुको हैसिएतले म कार्यक्रम सञ्चालक थिएँ । स्कुलिङ्ग विभागका सवैजना अतिथि बनाइएका थिए । विश्वास पनि मञ्चमा अतिथि भएर बसेकोमा मलाइ लाज जस्तो लागिरहेको थियो । जसोतसो त्यो दिनको कार्यक्रम सकियो । महिला संगठनकी नेता बिमला केसी, र अर्की एकजना केन्द्रिय सदस्य सुनिता शाही र जिल्ला इन्चार्ज पारशमणीले प्रशिक्षण दिए ।
भोलीपल्ट ८ बजेदेखि कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्ने थियो । पुसको चिसो स्याँठ चलिरहेको थियो । घरका छत र कान्लाका डिल सवैतिर तुषारो परेर सेताम्य भएको थियो । पारि पाखाका टुप्पाहरुमा विहानी घामका सुनौला किरणहरु पोतिएका थिए । आरुका गर्भिणी वोटमा गुलावी फूल फुल्न लागेका थिए । मेशमा चिया पाकिरहेको थियो । आगो ताप्दै चिया पिईरहेकी मलाइ मनोज दाइ वोलाउन आए । गुल्मीको सिर्सेनी घरभएका मनोज दाइ स्कुलिङ्ग विभागका सदस्य थिए र विश्वासका मिल्ने साथी थिए ।
म झसँग भएँ । कसले पो वोलाउन पठाएको होला, यसो मनमा गमेर हेरेँ । विश्वासले त होइन ? मनमा एक खाले रोमाञ्चकताले जिउ सिरिङ्ग गर्यो । होइन होला, आफैलाइ थुमथुम्याएँ । क्षितिज दाइले वोलाउन लगाए होलान । क्षितिज दाईले मसँग के के कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो । एक हप्ते स्कुलिङ्ग कार्यक्रममा पनि क्षितिज दाईले मलाई घरी घरी उठाउँदै प्रश्न सोध्दै गर्नुहुन्थ्यो । आज पनि पक्का क्षितिज दाईले नै बोलाउनुभएको होला भन्ने सोच्दै म मनोज दाइको पछि पछि गएँ । भित्र कतै अवचेतन मनमा भने मेरो मनको राजकुमार विश्वासले नै वोलाउन पठाएको भएपनि हुन्थ्यो । त्यस्तो भयो भने कति जाति हुन्थ्यो । त्यस्तै होस भन्दै मनमनै पुकारा गर्दै म नवोलिकन मनोज दाईको पछि पछि हिँडिरहेकी थिएँ ।
एउटा घरको पिँढीमा ठड्याईएको हरियो भर्याङ्गवाट हामी माथिल्लो तलामा उक्लियौं । मनोज दाइले मलाइ एउटा साघुँरो कोठामा लिएर जानुभयो । त्यहाँ सिरकले छोपिएर त्यहीँ मानिस बसिरहेको थियो जसलाइ मैले मन पराएकी थिएँ । जसको अनुपस्थितीमा जीवन फिका लाग्न थालेको थियो, त्यहीँ चश्मावाल पातलो मान्छे मेरो अगाडि बसेर मुस्कुराईरहेको थियो । म टुक्रुक्क घूँडा टेकेर उसको सामुन्नेमै बसेँ ।
एकअर्कालाइ हेरेर विश्वास र मनोज रहस्यमयी तरिुकाले मुस्काए । मलाइ त्यो मुस्कानको रहस्य थाहा भइहाल्यो । अव विश्वासले मलाइ प्रेम प्रस्ताव राख्दैछ भनेर मैले पहिल्यै अनुमान लगाएँ । विश्वास र म करिव १० मिनेट कुरा गरेर बस्यौं । उनले धेरै कुरा गरे ।आफूले मन पराएको मान्छेले यसरी एकान्तमा प्रेम प्रस्ताव राख्दा म अक्क न बक्क भएकी थिएँ । मनैमन त म खुशीले बुरुकबुरुक उफ्रिएकी थिएँ । औपचारिकताको लागि मैले सोच्नुपर्छ भनेर केही समय मागेँ ।
म खुरुर्र कुदेर कार्यक्रम हलमा पुँगे । एकातिर लाजले पानी पानी भएकी थिएँ । अर्कोतिर कस्तो मान्छे हो, पृष्ठभुमी कस्तो हो, घर कहाँ हो, भविष्यमा दुःख पाइने पो हो की भन्ने सोचेर गम्भिर भएकी थिएँ । कार्यक्रम शुरु हुन लाग्दै थियो । सवै हलमा आइसकेका थिए । म सञ्चालक नै गायव थिएँ । म हत्तपत्त माइक समातेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेँ । वोली लटपट लटपट भइरहेको थियो । यस्तो महत्वपूर्ण कुरा कस्लाइ सुनाऔँ भइरहेको थियो । तर उपयुक्त पात्र भेटाइरहेकी थिइन । दाइलाइ खुव मिस गरेँ । दाइ त्यतिवेला सेनाको कम्पनी कमिसार भएर जिल्ला बाहिर जानुभएको थियो ।
सिर्जना भाउजु त्यहीँ थिइन् । उनि महिला सँगठनकी अध्यक्ष थिइन । उनि अलि कडा स्वाभावकी थिइन् । उनलाइ यस्तो कुरो सुनाउने हो भने उल्टै झपार्लिन भन्ने लाग्यो । अर्की भाउजु निशाना पनि त्यहीँ थिइन् । उनिसँग भावनात्मक कुरा पनि हुन्थे । मैले उनैलाइ विश्वासको कुरा सुनाएँ । निशाना भाउजुले प्रस्ताव स्वीकार गर्दा ठिकै हुन्छ भनेर सुझाव दिइन् । मलाइ अलि राहत भयो । खाना खाने वेलामा क्षितिज दाइले मलाइ एक घन्टा जति कन्भिन्स गरे । उनि विश्वासका आफ्नै भिनाजु रहेछन् । विश्वासले मलाइ फेरी वोलाउन लगाएर भने–हामी आजै हिँड्दैछौं । मलाइ एस अथवा नो चाहियो । तपाइले यतै बस्न भन्नुहुन्छ भने म एक हप्ता पनि यतै बस्न तयार छु । तर हाम्रो टिम आजै अर्घाखाँचीको लागि हिँड्दैछ । मलाई तपाईको जवाफ लिएर मात्र यहाँबाट हिँड्नु छ ।
मैले २ बर्ष पछि बिहे गर्ने शर्तमा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरेँ । विश्वासले मेरो फोटो मागे, मैले दिएँ । उनको फोटो रहेनछ । उनले मेरो डायरीमा आफ्ना सुन्दर अक्षरले दाङ्गको ठेगाना टिपिदिए । खाना खाएपछि कार्यक्रम स्थगित भयो । सवैले मेरो प्रेम कहानी थाहा पाइसकेका थिए । १२ बजेतिर जिल्ला इन्चार्ज पारशमणी, सेक्रेटरी जितजंग, महिला नेताहरु विमला केसी, सुनिता दिदी, भाउजु सिर्जना, स्कुलिङ्ग टिमका सवैजना र म समेत वसेर हाम्रो विहे गराउने वारेमा छलफल भयो ।
सवैजनाले आजै यहीँ कार्यक्रममा बिहे गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आफ्नो विचार राखे । खासगरी जितजंग र क्षिंतिज दाइले आफ्नो बिहेको उदाहरण दिएरै कुरा राखे । प्रेम र विवाह भनेको एउटै कुरा हो । प्रेम गर्ने विवाहकै लागि हो । विवाह गरेपछि पनि प्रेम हुन्छ । लडाँइ एकदमै पेचिलो अवस्थामा छ । कतिखेर कहाँ मरिने हो थाहा छैन । छिटो विहे गर्दा सवैलाइ राम्रो हुन्छ भन्ने उनीहरुको बिचार थियो । विश्वासले आफ्नो अभिभावक भन्नु नै पार्टी रहेको र पार्टीको जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाइ मान्य भएको विचार राखे । सिर्जना भाउजुले एक अर्काको वारेमा राम्रोसँग थाहा नभइकन विहे गर्न नहुने धारणा राखिन् । अन्तमा मेरो वोल्ने पालो आयो । मैले कम्तिमा २ बर्ष प्रेम गर्न पाउनुपर्ने यदि आजै विहे गर्न कर गर्ने हो भने यो प्रेममा यहीँ पूर्णबिराम लगाउने बिचार राखेँ । एक अर्कालाइ राम्रोसँग वुझेर मात्र विबाह गर्नु राम्रो हुने मेरो बुझाइ थियो । त्यो दिन बिहे नहुने भयो ।विश्वासहरु त्यै दिन अर्घाखाँची हुँदै कपिलवस्तुतिर गए । हामी पनि कार्यक्रम सकेर फिल्डमा फर्कियौं ।
त्यसको १५ महिनापछि जिल्ला इन्चार्ज बामदेव क्षेत्री बिकल्पले प्यूठान जिल्ला इन्चार्ज क. अजितसिंह र दाङ जिल्ला इन्चार्ज क. डायमण्डको नाममा लेखिदिएका दुई चिठी बोकेर म र रोल्पा घर भएकी साथी रेणुका गुल्मीवाट दाङ पुग्यौं । नेताहरु देव गुरुङ र नेत्र बिक्रम चन्द बिप्लवको उपस्थितीमा दाङको दाङवाङ भन्ने स्थानमा विश्वाससँग म जनवादी बिहे बनधनमा बाँधिए । देशमा भने त्यतिवेला जनआन्दोलन भाग २ को तयारी भइरहेको थियो ।
Posted by Aastha kc at 11:57 AM No comments:
संस्मरणः जनसरकारमा हालेको उजुरी
हामीले गुल्मी जिल्लामा भर्खरै एउटा स्क्वायडको घोषणा गरेका थियौं । २०५७ सालमा भएको पार्टीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीमा सेना निर्माण गर्ने महत्वर्पूण निर्णय गरेको थियो। हाम्रो जिल्लाका नेता हिम्मत बराल मगर (कमरेड ध्रुव) राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात जनमुक्ति सेनाको तालमि प्राप्त गरी कम्पनी घोषणा कार्यक्रममा सहभागी भएर भर्खरै जिल्ला फर्किनुभएको थियो।
उहाँले हामीलाइ शैन्य तालिम गराउनु हुन्थ्यो । विहानै झिसमिसेमा उठेर हामी रनिङ्ग गथर््यौ । तालमा ताल मिलाउँदै कहिले जनसेना आयो, जनसेना आयो भन्दै दौडिरहेका हुन्थ्यौं । कहिले एक—दुइ—एक, एक—दुइ—एक, एक—दुइ—एक भन्दै पाइलामा पाइला मिलाएर दौडिरहेका हुन्थ्यौं । यसोगर्दा हामी धेरै जना परेड खेलिरहेको आवाजले त्यो सुनौलो बिहानीमा एउटा अचम्मलाग्दो संगीत पैदागरिरहेको हुन्थ्यो।
यसरी दौडिदा श्वास बढ्थ्यो । मुटु जोडजोडले धड्किन्थ्यो । हामीलाइ दौडिन कठिन हुन्थ्यो । तैपनि हाम्रो कमाण्डरले हामीलाइ काशन गरिरहन्थे । हामी यो सिंगो धर्तीका मानव जातिको मुक्तिका लागि लडिरहेका छौं भन्दै हातमा थ्रिनट थ्रि बोकेका कमाण्डरले जव हामीलाई काशन गर्न थाल्थे, हामी सिपाहीहरु उत्साहले आकाशमा कावा खान थाल्थ्यौं। एउटा गर्विलो छाती वोकेर सवै अप्ठ्यारा कठिनाइलाइ सहज र स्वाभाविक रुपमा स्वीकार गथ्र्यांै ।
त्यतिवेला मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि हामी धर्मशास्त्रहरुमा लेखिएका जस्तै इश्वरद्धारा धर्तीमा पठाइएका देवदुतहरु हौं। हामीले मात्र यो धर्तीमा रहेका सारा बेथिति, बिकृति र बिभेदको अन्त्य गर्न सक्छौं। सत्य र न्यायका लागि हामी जे पनि गर्न सक्छौं। कसैलाई मार्न परेपनि हामी हिचकिचाउँदैनौ। आफै मर्न परेपनि हामी पछि हट्नेछैनौ। किनकी हामी हिँडेको बाटो नै मानव मुक्तिको सर्वोत्तम बाटो हो। मानिसले मानिसमाथि गरिरहेको अन्याय, अत्याचार, बिभेद, शोषण, दमन र यहाँ लादिएका कुसंस्कार अन्त्यका लागि हामीले नगरे अरु कसैले गर्नेछैन। हामी कुनै पैशा कमाएर ऐश आरामको जिन्दगी बाँच्न होइन सिंगो मानव जातिको मुक्तिका लागि यो जीवनमरणको लडाइँमा होमिएका छौं। हाम्रा साथीहरु आज रातबिरात दुश्मनबाट मारिएका छन् ति मारिएका होइनन् ति त युगयुगसम्म बाँच्ने गरी अमर शहीद भएका हुन्। आबश्यक पर्यो भने हामी पनि शहीद हुन पछि हट्नु हुँदैन।
कमाण्डरले काशन गरिरहँदा म यस्तै यस्तै सोचिरहेकी हुन्थेँ र यस्तो महान कार्यमा अलिकति पनि योगदान गर्न पाएकोमा आफूलाई संसारकै भाग्यमानी केटी सम्झिन्थेँ। मन गदगद भएर आउँथ्यो। त्यतिवेला म भर्खर १६ बर्षकी किशोरी थिएँ। अनेकथरी सपना देख्ने र सपना फुलाउने याम थियो त्यो।
रनिङ्ग पछि क्रलिङ्गको अभ्यास हुन्थ्यो । भिम खिच्ने, पिटी, परेड खेल्ने, बन्दुक पड्काउने, दुश्मनको घेरामा परे कसरी घेरा तोड्ने जस्ता अभ्यास पनि हुन्थे । कहिलेकाँही दुइवटा टिम वनाएर लडाँइको अभ्यास गरिन्थ्यो । एकथरी प्रहरी हुन्थे अर्कोथरी जनमुक्ति सेना हुन्थे । म पनि मन लगएर ति मध्येको एउटा टिममा सैन्य अभ्यास गरिरहेकी हुन्थेँ ।
हामी हरेक दिन यसरी नै सैन्य अभ्यास गथ्र्यौं । हिँड्दा पनि शैन्य फर्मेशनमै हिँड्थ्यौं । सवैभन्दा अगाडि एफजिएल हिँड्थ्यो । महत्वपूर्ण व्यक्ति ठिक बिचमा हुन्थ्यो ।
यसरी स्क्वायड गठन भएपछि पार्टीले दुइटा टिम बनाएर जिल्लाभरी मार्च पाश गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यो मध्येको एउटा टिमकी सदस्य म पनि थिएँ । हाम्रो टिमको राजनितिक कमिसार पृथ्वी दाइ थिए ।
म मेरो दाइ युबराजकै प्रेरणाले माओबादी भएकी थिएँ । दाइले नै धेरै कुरा गरेर मलाई प्रशिक्षित गर्नुभएको थियो। निकै मिहिनेतका साथ उहाँले मलाइ पार्टीमा भुमिगत हुनको लागि प्रभावित पार्नुभएको थियो ।
मेरो आफ्नै दाजु आन्दोलनमासँगै भएको कारण पनि होला । म प्रायः दाइको स्तर र उमेरका व्यक्तिलाइ दाइ नै भन्थेँ । दाइकै नजरले हेँर्थे र उनिहरु पनि मलाइ बहिनीकै नजरले हेरुन भन्ने मेरो चाहना हुन्थ्यो । तर पार्टीका सवै दाइहरु इमान्दार नियतका थिएनन भन्ने मैले पछि थाहा पाएँ । क.पृथ्वीलाइ पनि म दाई भनेर सम्वोधन गर्थेँ ।
उनको एउटा नराम्रो बानी थियो। अरुलाई छोएर र धाप मारेर कुरा गर्ने उनको वानी मलाइ फिटिक्कै मन पर्दैनथ्यो । त्यसैले म प्रायः उनको नजिक पर्दैनथेँ। उनि मेरो नजिक आउने बहाना खोजिरहेका हुन्थे । मलाइ छोएर कुरा गर्ने र समय अनुकुल मिल्नासाथ मौकाको फाइदा उठाउन चुक्दैनथे ।
मार्चपाश अभियानमा म कमरेड पृथ्वीकै कमाण्डको टिममा परेँ । त्यसैले त्यो मार्चपाशको उद्घाटनको दिन म धेरै नै उदाश भइरहेकी थिएँ । यहाँसम्मकी म संगीता नाम गरेकी साथीसँग बसेर रोएकी थिएँ । यस्तो कुरा खासै शेयर गर्न पनि सकिँदैनथ्यो । मन नलागि नलागि म त्यो यात्रामा सहभागी भएँ ।
हिँड्दै जाँदा हामीले पार्टीको प्रचार र संघर्षका काम पनि गरिरहेका थियौं । गाँउमा कतै जुवा तास खेलेर बसेकाहरु भेटिए भने हामी कार्वाही गथ्यौंं । कहिलेकाँही ठाँउ ठाँउमा स साना भेला वोलाएर पार्टीका कुराहरु गर्ने, जनता जुटाएर माओवादी आन्दोलन जनताकै लागि भएको र यसमा जनता सवैले कुनै न कुनै रुपमा भाग लिनुपर्ने, जनबर्गिय संगठन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसको औचित्य किन भनेर सम्झाउँथ्यौं।
खाना खान हामी जनताको घरमा प्रायः दुइ देखि चारजना सम्म बाँडिन्थ्यौं। जनताको घरमा खाना खानुको उदेश्य तिनलाई माओवादी आन्दोलनबारे बुझाउनु, छलफलमा भाग लिन प्रेरित गर्नु र केही अस्पष्टताहरु भए स्पष्ट पार्नु हुन्थ्यो। गाउँमा बाँडिएर खाना खाएपनि सुत्नेवेला प्रायः एउटै घरमा सुतिन्थ्यो । एउटै घरमा अटाउने भएन भने नजिकका दुइवटा घरमा सुत्ने मिलाइन्थ्यो । राती सेन्ट्री बस्नुपथ्र्यो । कहिले आधा घन्टा त कहिले एक घन्टा पालो पथ्र्यो ।
म झण्डै बलात्कारमा परेँ
२०५८ साल असोजको महिना थियो ।
एक दिन एउटा घटना भयो । त्यस रात म सेन्ट्री बसेर फर्किएँ । पहिलो सेन्ट्रीको पालो प्रायः मेरै हुन्थ्यो। कहिले दुइजना बस्थ्यौं, कहिले एक्लै बस्नुर्पथ्यो। त्यसरात म एक्लै सेन्ट्री बस्नुपर्ने भयो।
दुश्मन कुनैपनि वेला गाउँ पस्न सक्थ्यो। त्यतिवेला सेना परिचालन भइसकेको थिएन। गाउँका प्रहरी चौकीहरु उठिसकेका थिए। प्रहरी सदरमुकाममा सिमित भएको थियो। तैपनि बेला बेला गस्ती गर्न आइरहन्थ्यो। कतिवेला कसलाई गिरफ्तार गरेर लैजाने हो र बेपत्ता पार्ने हो भन्ने भय भइरहन्थ्यो। त्यसैले जुनसुकै वेला सुरक्षा सर्तकता अपनाउनका लागि हामी पालैपालो सेन्ट्री बस्ने गर्दथ्यौं। यो शैन्य फर्मेशनको एउटा सामान्य नियम थियो।
एक घन्टा सेन्ट्री बसेपछि मेरो पालो सकियो। अर्को साथी मलाई पालो दिन आएपछि घडी, बन्दुक र ग्रिनेड उहाँको जिम्मा लगाएर म सुत्ने कोठामा आएँ। चौडाइ भन्दा लम्बाइ दोव्वर भएको लामो कोठामा हामी सवै टिमको लागि ओच्छ्यान बनाइएको थियो । पुरुष कमरेडहरु एक लाइनमा र महिला कमरेडहरु पनि सोही लाइनमा सुत्ने मिलाइएको थियो । विचमा मुश्किलले एकहात जति ठाँउ खाली राखिएको थियो । त्यहाँ हाम्रा झोला र बन्दुकहरु तेर्सो पारेर वार बनाइएको थियो ।
पुरुष पट्टिीको लाइनको छेउमा उनै क.पृथ्वी सुतिरहेका थिए । महिला पट्टीकोमा छेउको ओच्छ्यान मेरो लागि खाली थियो । मलाइ यसरी एउटै कोठामा पुरुष कमरेडहरुसँग सुत्ने अभ्यास भैसकेको थिएन । अप्ठ्यारो लाग्यो ।
मैले घर छोडेर भुमिगत भएको ६ महिनाजति भएको थियो। बितेका दिनमा यसरी एउटै कोठामा पुरुष कमरेडहरु र महिला कामरेडहरु सुत्नुपरेको थिएन। अनिता दिदी, सिर्जना, बिपना, कल्पना, संगीता, कविता लगायतका हामी महिलाहरु प्रायजसो संगै हुन्थ्यौं। संगै हिँड्थ्यौं खान्थ्यौं र सुत्दा पनि संगै हुन्थ्यौं। आज नितान्त नौलो अनुभुति गर्दै थिएँ। केही डर, लाज र संकोचले म खुम्चिएकी थिएँ। समाज बदल्ने अभियानमा हिँडेका अभियात्रीहरुसँग डर या संकोच मान्नुपर्ने केही थिएन। अप्ठ्यारै लागेपनि रात विताउनु त छँदै थियो । प्रायः सवै कमरेडहरु निदाईसकेका थिए । फर्मेशनमा यस्तै त हुन्छ होला भन्ने लाग्यो । यस्ता कत्ति अप्ठेरालाइ पानीको घुट्कासँगै पिउनुपर्नेछ । आफ्नै दाईहरु त हुन् नि भन्ने सोच्दै म छेउको विस्तरामा गएर पल्टिएँ । दिनभरको हिँडाईले लखतरान थाकेकी म कतिवेला निदाएँ पत्तै भएन ।
मध्यरातमा मलाई लाग्यो । कसैले मेरो जिउ सुमसुम्याइरहेको छ। म डरले खंग्रंगै भएँ । जिउ काम्न थाल्यो । म कहाँ छु र यो के भइरहेको छ भनेर एकछिन मैले आफैलाइ अध्ययन गरेँ । मैले म जनमुक्ति सेनाको मार्च पाश अभियान अन्तर्गत एउटा गाँउमा सेल्टर लिइरहेको र आफ्ना कमरेडहरुसँगै एउटा कोठामा सुतिरहेकी छु भनेर सम्झिएँ ।
झल्याँस्स याद आयो । पृथ्वी दाइ मेरो पल्लो पट्टिी छेउमा सुतिरहेका थिए । मेरो जीउमा हात डुलाइरहने मेरा राजनितिक कमिशार पृथ्वी नै थिए भन्नेमा म ढुक्क भएँ । अव अर्को कुरा थाहा पाउनु थियो । उनले यो सव निद्रामा गरिरहेका छन कि नियतबश गरिरहेका छन् भनेर पत्ता लगाउनु थियो ।
म निद्रामै भए जस्तै सास रोकेर उनका गतिविधी नियाल्न थालेँ । उनका हात मेरो शरीरमा अनियन्त्रित भएर निष्फिक्री चलिरहेका थिए । मैले शर्टपाइन्ट लगाएकी थिएँ । यतिञ्जेल उनले शर्ट वाहिरबाटै छाती र कम्मरको आसपास हात डुलाइरहेका थिए । अव उनका हातले मेरो शर्टको बटन खोल्न लागेका थिए ।
यो काम त निद्रामा होइन, पुरै होशमा नियतबश भइरहेको थियो । उनि खराव नियतले मेरो नजिकै सुतेका थिए र खराव नियतले नै मेरो शरीरमा हात डुलाउँदै थिए । मलाइ के गरौं र कसो गरौं औडाहा भयो । एक मनले लाग्यो — चिच्याएर सवैलाइ उठाँउ । कुन्नी के सोचेर हो, त्यो हिम्मत जुटाउन सकिन ।
मैले उनको हात चपक्क समातेँ र जोडले उतापट्टी फ्याँकिदिएँ । त्यसपछि म जुरुक्क उठेँ । कोठामा पुरै अँध्यारो थियो । अरु सवैजना निदाइरहेका थिए । सिरानीमा लाइट थियो । वालेर हेरँे, छेउमा वार लगाएका बन्दुक र झोलाहरु एउटा कुनामा सारिएको थियो । उनि चाँहि हत्त न पत्त उता फर्केर सिरकले मुख छोपेर सुते । मलाइ औडाहा भइरहेको थियो । जुरुक्क उठेर वाहिर निस्किएँ । हातको घडी हेरेँ, विहानको साढे तीन बजेको थियो ।
वाहिर टहटह जुन लागिरहेको थियो । जुन चम्किलो आभामा मुस्कुराइरहेको थियो । मेरो मन भित्रको जुन भने अस्ताएको थियो । अध्याँरो भएको थियो । मेरो मुख सुकेर च्याप च्याप भइरहेको थियो । थुक पनि आइरहेको थिएन । मन व्याकुल भएको थियो । मलाइ चिच्याएर, डाँको छोडेर रुन मन लागिरहेको थियो ।
मैले आफूलाइ निरिह, एक्ली भिरमा उभिएकी जस्ती पाएँ । कसलाइ भन्नु यस्तो कुरा । कोही मन मिल्ने साथी पनि थिएन । आमालाइ सम्झिएर बरबरी आँशु झरिरहे । आमालाइ नभेटेको केही महिना भएको थियो । वेस्सरी आमालाइ सम्झिएर रोइरहेँ । आँगनको वरपर हेँरे । सेन्ट्रीमा को बसेको थियो कुन्नि । कसैलाइ देखिन । पिँढीमा खाट थियो । खाटमा बसेँ ।
म भर्खर त्यस्तै १६ पुगेर १७ मा लाग्दै थिएँ । नयाँ—नयाँ सपना र कल्पना सजाउने उमेर थियो त्यो । समाजमा भएको विभेद, शोषण र असमानताका पर्खालहरु भत्काउनको लागि म यो क्रान्तिको वाटोमा हिँडेकी थिएँ । हत्केलामा प्राण राखेर हिँडिएको थियो । टाउकोमा कफन बाँधेर हिँडिएको थियो ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि विद्रोही भएकी मैले पार्टी भित्रपनि यस्ता व्यभिचारीहरु हुनसक्छन् भनेर सोचीसकेकी थिइन । आफ्नै दाजुजस्ता नेताले यसरी ममाथि कुनियत राखेर के गर्न खोजेका थिए सोच्दा सोच्दा टाउको दुखिरहेको थियो ।
मलाई फेरी फर्किएर विस्तरामा जाने जाँगर चलेन । त्यहाँ जानुको अर्थ थियो ममाथि बलात्कार गर्न खोज्ने त्यो कमरेड नामको कलंकको अनुहार हेर्नु । मलाई अव उसको त्यो कपट भरिएको अनुहार हेर्न मन थिएन ।
म घरी जुन हेर्दै, घरी रुँदै, घरी आँशु पुछेर अव पार्टी सार्टी छोड्छु र घर जान्छु अनि आफ्नो पढाइ अगाडि बढाउँछु भन्ने सोच्दै डेढ घन्टा खाटमै बसिरहेँ । बिहानको पाँच बजेपछि त्यो घरकाी आमा उठिन् । म पनि भान्सामा गएर आगो ताप्दै घरवेटीआमासँग कुरा गरेर बसेँ ।
नानी किन यति छिटो उठेकी — घरवेटी आमाले माँयाले सोधिन् ।
मेरा गह भरिएर आए । म किन छिटो उठेकी थिएँ भनेर आमालाइ भन्न पनि सक्दिनथेँ । यत्तिकै चुपचाप लागेर बसेँ ।
आमाले आगो सल्काइन् । कुँडो वसालिन । म छेउमा बसेर आगोमा दाउरा जोरिरहेँ ।
एकदमै निराश र क्लान्त भएकी थिएँ । यस्तो परिस्थितीको सामना गर्नुपर्ला भन्ने कहिल्यै सोचेकी थिइन । अव कसरी घरसम्म पुग्ने यहीँ सोचेर मथिङगल खल्बलिइरहेको थियो ।
६ बजेतिर सवैजना उठे । हाम्रो टिमकी कमरेड कल्पना जो महिला मध्येकी सिनिएर थिइन् । भान्सामा आइन् ।
कमरेड पृथ्वीले विहानै उठेर सवैलाइ के सुनाएछन् भने आस्थाको वानी खराव रहेछ । छेउमा राखेका बन्दुक र झोलाका वार हटाएर उनि मेरै छेउमा सुत्न आइपुगेकी थिइन् । उनले मेरो जिउमाथि खुट्टा पनि चढाइन् ।
कल्पनाले मलाइ यस्तो कुरा सुनाएर हाँसि । स—सानो कुरामा पनि ठूलो स्वरमा हाँस्ने र प्रायः अरुलाइ हाँसोमा उडाइरहने वानी उसको थियो । मलाइ केही वोल्न मन लागेन । यस्तीसँग के कुरा गर्नु भनेर चुप लागेँ ।
फेरी कसै न कसैलाई त मैले भन्नै पथ्र्यो । म यत्तिकै चुप लागेर बसेँ भने कमरेड पृथ्वी जस्ता व्यक्तिको मनोवल बढ्नेछ । फेरी कुनैपनि वेला अर्की कोही केटी यिनको शिकार हुनेछे । मैले कल्पनासँग सवै कुरा वेलिविस्तार लगाएँ ।
जिल्ला जनसरकार प्रमुख कुमारदाइलाई यो कुरा उजुरी गर्ने सल्लाह कल्पनाले दिई ।
म घर जान चाहन्छु, मलाइ त्यहाँसम्म पुर्याइदेउ भनेर मैले कल्पनालाइ भने ।
तर उसले मेरो कुरा सुनेको नसुन्यै गरी । मैले भागीहाल्ने हिम्मत गर्न सकिन । मसँग पैशा पनि त थिएन । हिँडेरै घर जान पनि कति दिन लाग्छ भौगोलिक रुपमा अन्जान थिएँ। मन नलागि नलागि म पृथ्वीको अनुहार फेरी हेर्न वाध्य भएँ । टिम त्यहाँवाट मार्चपाश गर्दै अगाडि बढ्यो ।
पहिले तर्किएर परपर हिँडेकी हुन्थेँ, अव मैले पृथ्वीसँग वोलचाल छाडिदिएँ । मेरो एउटै उदेश्य जनसरकार प्रमुख कुमार दाइलाइ भेट्नु र उजुरी दर्ज गर्नु थियो । एक एक पाइला गह«ौं भएका थिए । कुनै उत्साह विना म केवल आफ्ना पाइला घिसारीरहेकी थिएँ ।
उत्साहले भरिएकी एउटी केटी निरुत्साहित भएकी थिइ । मुक्ति र परिवर्तनका लागि घर परिवार, आफ्नो पढाई समेत छोेडेर क्रान्तिको बलिवेदीमा होमिएकी म यो क्रान्ति भन्ने कुरा पनि भ्रम रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेकी थिएँ । म निराशाको चरम दलदलमा भासिइरहेकी थिएँ । पार्टी र क्रान्तिवाटै पलायन हुने वारेमा सोचिरहेकी थिएँ ।
कुमार दाईसँगको भेट र क्रान्तिप्रतिको लगाव
करिव हप्ता दिन यत्तिकै निराशामा विते । एकहप्तापछि जिल्ला जनसरकार प्रमुख सुदर्शन बराल उर्फ कुमार दाइसँग भेट भयो । मैले कुमार दाइलाइ सवै कुरा विस्तारमा सुनाउन सकिन । म भित्र भरिएका कुण्ठाहरु जसोतसो सुनाएँ ।
म रोइरहेकी थिएँ । पार्टीभित्र यस्ता गलत नियत भएका मानिसहरु रहेछन् । तपाईहरुले बनाउने भनेको विभेद, असमानता र शोषण विनाको समाज यस्ता व्यभिचारी सोँच र पाखण्ड वोकेर हिँडेका मानिसले कसरी बन्न दिन्छन् दाइ ? म माथि भएको त्यो घटनालाइ मैले कसरी वुझ्ने ? म जिल्ला जनसरकारमा क. पृथ्वी विरुद्ध महिला हिंसाको उजुरी दर्ज गर्न चाहन्छु । के तपाई उनलाइ कठघरामा उभ्याउन सक्नुहुन्छ ?
कुमार दाइले मलाइ निकै सम्झाउनुभयो । उहाँको सार यस्तो थियो—जव हाम्रो समाजमा वलात्कारी, व्यभिचारी, चोर, फटाहा, भाइमारुवा, दाइमारुवा छन् भने हाम्रो पार्टीमा यस्ता चिन्तन भएका मान्छेहरु देखिनु स्वाभाविक छ । हामीले मंगल ग्रहवाट आएका मान्छेलाइ पार्टी सदस्यता दिन त सक्दैनौ नि । अथवा अरु राम्रा चिन्तन भएका मानिसहरु एकाएक, राताराता पैदा हुने त होइनन् ।
हामी भित्र सकारात्मक र नकारात्मक गुण र प्रवृत्तिहरु छन् । हामीले सकारात्मक गुण र प्रवृत्तिलाइ बढावा दिँदै जाने हो । नकारात्मक गुण र प्रवृत्तिलाइ त्याग्ने हो । सकारात्मक चिन्तन हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाँही नकारात्मक चिन्तन हावी हुने समस्या पनि आउन खोज्छ । सचेतता पूर्वक त्यसलाइ चिरेर जानुपर्छ ।
पार्टीभित्र अथवा कहिँपनि हामीले सुनेका भगवान जस्ता कुनै दोष नभएका मान्छेहरु, अथवा सर्लक्क धोएको मुला जस्ता सफा मान्छेहरु हुँदैनन् । दुधले नुहाएका जस्ता पवित्र मान्छेहरु कतैपनि हुँदैनन् । हामीले त्यस्तो कमजोरी रहित मान्छे बन्ने कोशिष गर्नुपर्छ । हामी आफू त्यस्तो मान्छे बनेरमात्र सहीमानेमा राम्रो समाज निर्माण गर्नसक्छौं ।
हाम्रो समाजमा त्यस्ता मान्छे छन् जो महिलामाथि कुनियत राख्छन् । महिलालाइ मनोरञ्जनको साधन ठान्छन् । अथवा दोश्रो दर्जाको नागरिक ठान्छन् । महिलाले पनि पुरुष जत्तिकै क्षमता राख्छन् वा उनीहरुका आफ्ना इच्छा, चाहना र रहरहरु हुन्छन् भन्ने कुरा उनिहरुको दिमागमा हुँदैन । त्यस्तै प्रवृत्ति र चिन्तनले भरिएका मान्छेहरु हाम्रो पार्टी भित्र पनि छन् ।
क्रान्ति गर्न हिँडेका क्रान्तिकारीहरु भएको पार्टी भित्रै त तिमी पिडित हुन्छौ भने वाहिर झन धेरै पिडित हुनेछौ । तिमीले जहाँ भएपनि आफूमाथि भएका अन्यायहरुको डटेर मुकाविला गर्नुपर्छ । त्यो आत्मसम्मान र आत्मविश्वास तिमीले जुटाउनु पर्नेछ ।
जवसम्म तिमी सवै हिसावले आफूमाथि र आफ्नो बर्गमाथि भएका अन्यायहरुलाइ चिनेर त्यसको मुकाविला गर्ने आत्मविश्वास जुटाउन सक्नेछैनौ तवसम्म अरुले यसरी नै तिमीमाथि अन्याय गरिरहनेछन् । तिमी कहिलेसम्म यसरी आफैसँग भागिरहन्छौ, र भागेर कहाँ जान्छौ । तिम्रो लडाँइ त भर्खर शुरु भएको छ । तिमीले यसरी आफ्नो मनोवल गिराएर समस्यावाट भाग्ने मानसिकता नवनाउ । सवै प्रकारका अन्यायहरुको विरुद्ध लड्नको लागि सक्षम मानिसहरु र विशेषतः महिलाहरुको पल्टनहरु निर्माण गर्ने दायित्व तिम्रो काँधमा छ ।
कुमार दाइले धाराप्रवाह मलाइ सम्झाउनुभयो । एउटा सानो तिनो क्लास नै दिनुभयो । म रिफ्रेस भएँ । मेरा सारा निराशाहरुको ठाँउमा आशाको संचार भयो । यस्तो लाग्यो म आनन्दले आशाको नदीमा पौडी खेलिरहेकी छु अथवा हावाका मधुर झोक्कासँग उड्दै आकाशमा कावा खाइरहेकी छु ।
हो त नि मैले कत्ति धेरै काम गर्नुपर्नेछ। म त महान जिम्मेवारी आफ्नो कााधमा बोकेर हिँडेकी मान्छे हुँ। समाज परिबर्तन गर्नु चानचुने कुरा कहाँ हो र । समाजमा त झन महिलाको स्थान कहिँ पनि छैन। यसो दुइचार कुरा बोल्न लागे लौ पोथी बास्यो भन्ने समाज हाम्रै समाज होइन र। रक्सी खाएर आएर घरमा खाना खान पर्खेर बसेकी श्रीमती कुट्ने मेरै समाज हो। बाटो घाटो ढुकेर केटीहरुलाई बाटो छेक्ने, जर्वजस्ती गर्ने समाज मेरै समाज हो। मैले यस्तो समाजसँग आत्मसर्मपण होइन। बिद्रोह गर्नुपर्छ। ति समस्त महिलाहरुका लागि जो पिडाको आँशु पिएर घर नामको जेलमा कैद छन् सबैको लागि मैले केही त गर्नैपर्छ। कुमार दाइले सम्झाउँदै गर्दा मेरा आँशु थामिएका थिए। मैले मनै मनमा यसरी समाजमा आफ्नो र म जस्ता महिलाको स्थान कहाँनेर छ भनेर सोचिरहेकी थिएँ।
कमरेड पृथ्वीले जस्तै सोँच राख्ने मानिस पार्टी भित्र र वाहिर जता पनि छन् । मेरो लडाँइ ति समस्त मान्छेहरुको बिरुद्धमा हो । जो महिलालाइ आफूले मन लागेको वेला उपभोग गर्ने मनोरञ्जनको बस्तु भन्ठान्छन् । जो महिलालाइ अगाडि बढेर नेतृत्व गरेको देख्न सक्दैनन् । म जहाँ रहेपनि यिनीहरुका विरुद्ध संघर्ष गरेरै वाँच्नेछु । ति समस्त महिलाहरुका खातिर जसले विभेदको आँशुलाइ पानी सरह पिईरहेका छन् । तिनीहरुको मुक्तिका खातिर एकथोपा रगत र एक मुठ्ठी प्राण रहुञ्जेल म संघर्ष गर्नेछु । मैले यस्तै यस्तै सोचिरहेँ ।
कमरेड पृथ्वीलाइ मेरो अगाडि राखेर आत्मालोचना गराउने वाचा सहित जनसरकार प्रमुख कुमार दाइ मसँग विदा भएर जानुभयो ।
त्यसको एकमहिना पछि गुल्मीकै अर्का नेता जो पछि पहिलो संविधानसभामा क्षेत्र नं. ३ वाट निर्वाचित भएका थिए तिनै चन्द्र थापा सागर र कुमार दाइ वसेर फेरी मेरो बयान लिए । मानौ म नै अपराधि थिएँ जस्तो गरेर चन्द्र दाइले मलाई केरकार गरे । मैले त्यहीँ कुरा वताएँ जुन कुरा कुमार दाइलाई बताएकी थिएँ ।
अव अर्को बसाइमा कमरेड पृथ्वी र मलाइ आमने सामने बसाएर दुवैको बयान लिने र उनलाई आत्मालोचना गराउने भन्ने भयो । त्यसो गर्दासम्म देशमा संकटकाल लागिसकेको थियो । संकटकाल घोषणा भएको केही दिनमै कमरेड पृथ्वीलाई गस्तीमा आएको तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको एक टोलीले गिरफ्तार गरेर सदरमुकाम तम्घासतिर लिएर गयो भन्ने सुनियो ।
गिरफ्तारीमा पर्दा पृथ्वी दाइ पार्टी कामको शिलशिलामा कतै गईरहेका थिए । उनि सादा पोशाकमा थिए र उनिसँग पार्टीका केही पर्चा, पम्पलेट वाहेक केही थिएनन् । तर फाशिष्ट सरकारको नुनपानी खाएका सेनाहरुले गिरफ्तारीको तिनदिनपछि रेसुंगाको जंगलमा लगेर कम्व्याट ड्रेस लगाइदिएर पृथ्वी लगायत अरु दुइजना सर्वसाधारणलाइ गोली हानेर हत्या गरे ।
कमरेड पृथ्वीले मसँग दुव्र्यवहार गरेर गल्ती गरेका थिए । आलोचना र आत्मालोचना गरेर हामी क्लियर हुन चाहन्थ्यौं । मैले सुने अनुसार उनले आफ्नो गलती स्वीकार गरेका थिए । मैले पनि चेतावनी सहित माफी दिने सोँच वनाएकी थिएँ । उनि जतिवेला गिरफ्तारिमा परे त्यतिवेला हाम्रो वोलचाल पनि बन्द थियो । म उनिसँग पहिलेको जस्तै क्रान्तिप्रति समर्पित नेता र कार्यकर्ताको सम्वन्ध बनाउन चाहन्थेँ ।
गल्ती जो कसैवाट पनि हुन सक्छ । त्यसवाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नेमात्र महान बन्न सक्छ । उनि पनि गल्ती स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने सोँचमा थिए । तर विडम्वना जिल्ला जनसरकारले मेरो उजुरीको छानबिन गर्न समय लगाइदियो र हामी कहिल्यै आमने सामने भएर कुरा गर्न पाएनौ ।
अव उनि सर्वहारावर्गको मुक्तिका लागि शहीद भइसकेका थिए । मनमा परेको गाँठो फुकाएर मैले उनलाइ श्रद्धाञ्जली दिएँ । उनले देखाएको वाटो अनुसरण गर्दै बलिदानीको वाटोमा आफूलाइ उभ्याउँदै क्रान्तिका लागि जीवनरहेसम्म लागिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै पार्टी काममा आफूलाई केन्द्रित गरेँ गरिरहेँ ।
Posted by Aastha kc at 3:26 AM No comments:
हाम्रो बर्ग नै फरक परिसकेको रहेछ
आदरणीय दाजु ‘समीर’
दाजु समयको एउटा अन्तरालपछि आज आफ्नो दिल खोलेर तपाईको नाँउमा यो पत्र कोर्ने हिम्मत जुटाएकी छु। पत्रमा अनर्थ लाग्ने केही लेखिएछ भने क्षमा गरिदिनुहोला।
अञ्जुलीको पानी जस्तै थोपा थोपा बगेर जाने समयलाई रोक्न सक्दी हुँ त म घडीमा टिकटिक गर्ने सुईलाई १५ बर्ष अगाडि पुर्याईदिने थिँए । जहाँ मेरो चञ्चले यौवनकाल थियो । मेरा निर्दोष कुमारी रहरहरु थिए । जामाभरी भरी स साना ढुंगा बटुलेर चारी खेल्दै म लेकका चौरहरुमा बाख्रा चराईरहेकी हुँदी हुँ ।
बारीका कान्लाहरुमा घाँस काटिरहेकी हुँदी हुँ । स्कुलबाट फर्किएपछि आमाले भुटिदिएको मकै र भट्ट फ्रकको गोजीमा राखेर पर धारामा पानी लिन जाँदी हुँ र एकछिन साथीहरुसँग चुन्नी या राज्य केही खेल्न पनि पाउँदी हुँ । दैलामुनिको तरकारीबारीबाट सिप्चना टिपेर तरकारी बनाउन आमालाई सघाउँदी पनि हुँ ।
तर बितेर जाने समयलाई कसले पो रोक्न सक्छ र । केवल आफ्ना गल्तीको महशुष गरेर ऐठन परेको मुटुलाई जर्बजस्ती सम्हाल्दै अगाडि बढ्नुको बिकल्प कसैसँग पनि त हुँदैन । यात्राका यि अनबरत पहाडहरु चढिरहँदा समयको घोडेदौडमा पराजित भएकाहरु उठेर हिंड्ने साहस गर्न सकेनन् भने जीन्दगी नामको यो अमुल्य जिनिसको मुल्यबोध कहिल्यै हुनसक्ने छैन । तर आज मलाई अमूल्य जीन्दगीको महत्वबोध भएको छ र त तपाईको नाममा यि दुईचार अक्षर कोर्दैछु ।
करिव १० बर्ष पछाडि तपाईसँग काठमाडौंमा भेट हुने मौका मिल्यो । तपाईसँग भेट हुने बित्तिकै बिगत सरसर्ती आँखामा आएर उभियो । तपाईले सम्हालेका मोर्चाहरु सम्झना भएर आए । संगठन भित्रका गलत तत्वहरुलाई भण्डाफोर गर्नुपर्छ भनेर तपाईले भनेको सम्झिएँ ।
परिबर्तनका सपनाहरु देखाएर हामीलाई युद्धको अघिल्लो मोर्चामा लड्न हानथाप गराउने तपाईका जोशिला भाषणहरु सम्झिएँ । जनताको हातमा सत्ता आएपछि मात्र यो लडाँई थामिने भनेको पनि याद आयो । अनि त्यो सत्तामा सबैको समान अधिकार हुनेछ भनेको पनि मैले भुल्न सकेकी रहिनछु ।
१० बर्षपछि तपाईसँग भेट हुँदा धेरै कुरा सोध्न मन थियो । तपाई त करोडौंका कुरा गर्दै हिंड्नुहुँदो रहेछ तर मुक्ति र परिबर्तनको सपना देखेर युद्धमा सहभागी कैयौं साथीहरु आज घर न घाटका भएको मैले देखेकी छु ।ति साथीहरु बिहान साँझ के खाने, कसरी कोठाभाडा तिर्ने र छोराछोरीको फिस कसरी तिर्ने भनेर रन्थनिएको तपाईले देख्नुभयो कि भएन।
परिबर्तनकारी युद्ध शुरु भएको २० बर्ष र शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको ९ बर्ष भईसक्दा पनि किन सबैको सत्तामा समान सहभागिता हुन सकेको छैन या किन सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार काम पाउन सकेका छैनन भनेर तपाईलाई सोध्ने मन थियो । तर तपाई आफ्ना कुरा गरेर हिंडिहाल्नुभयो । मैले त मेरो कुरा भन्नै पाईन । या यसो भनौ तपाईमा त्यो सुन्ने चेष्टा नै थिएन ।
आज म आफ्नो लक्ष्य प्रति अझै दृढ भएकी छु । आफ्ना सपनाहरु टुक्रिएको हेर्न म कसरी सक्छु < आफ्नो सपनाको भ्रुणमै हत्या भएको म कसरी सहन सक्छु < अँह सक्दिन । त्यसैले आज म सगर्ब तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु म अझै बलियोसँग उभिएकी छु आफ्नो धरातलमा । गलत कुराको भण्डाफोर गर्ने र सही कुराको पक्षपोषण गर्ने लाईनमा बलियोसँग लाग्ने आत्मबिश्वास जुटाएकी छु ।
ओहो समय कसरी परिवर्तन भएछ । तपाई जसलाई सभ्यताको पूजारी ठान्नुहुन्छ म त्यहाँ मानवताको नाममा कलंक मात्र देख्छु । तपाईको लवाई, खवाई, उठबस सबैसबैलाई तपाँई परिबर्तन भएको देख्नुहुन्छ तर म त त्यहाँ बिचलन बाहेक केही देख्दिन । भन्न मन लाग्छ, तपाई जस्ताहरुमा आएको बिचलन र स्खलनले नै त हो आज नेपाली माओवादी आन्दोलनमा बिखण्डन आएको । पार्टी टुक्रा टुक्रा भएर बिभाजन हुँदा सम्मपनि तपाईहरु आफ्नो ब्यक्तिगत फाईदा कहाँबाट लिन सकिन्छ, कसरी आफ्नो दूनो सोझ्याउन सकिन्छ भनेर दिनरात एक गरेर लागेको कसैको आँखाबाट लुक्न सकेको छ र ।
के थिए माओवादी जनयुद्धका लक्ष्य, उदेश्य र सपनाहरु < यि बिषयहरुमा घन्टौंसम्म तपाईले हामीलाई दिएका क्लासहरु के तपाईले बिर्सिनुभयो र मैले त रत्तिभर पनि बिर्सनसकेकी छैन । हुन त तपाई शान्तिप्रक्रियामा आईसकेपछाडि धेरै बदलिसक्नुभएको रहेछ । काठमाडौंका सुकिला मुकिलासँग तपाईको बाक्लो उठबस उकालिँदै गएको रहेछ । तपाई ति झुत्रा दिनहरु सम्झिन पनि चाहनुहुन्न होला । तर के बिर्सिउँ भन्दैमा हामीले हाम्रो बिगतलाई बिर्सिन सक्छौं र ? हामीले हिजो तरेर आएका दोभानहरु चटक्कै बिर्सनु भनेको हामी आफैलाई बिर्सनु होईन र ।
हुन त यस्ता कुराहरुमा दाई म भन्दा धेरै जान्ने हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । तैपनि किन किन म चुप लाग्न सकिरहेकी छैन । समाज परिवर्तनका लागि भनेर अर्जेवाकी १५ बर्षकी बहिनी ‘अञ्जली’ ले आफ्नो जीवन के यत्तिकै खेर फालेकी हुन् ।
फोक्सिंगको ‘पहाड’ भाई जसकी आमा अझै पनि छोरो आउने आशामा बाटोभरी आँखा ओच्छ्याएर बस्ने गर्छिन् । के उनले आफ्नो जीवन तपाई हामीलाई यसरी शानको जीवन वाँच्नको लागि सुम्पिएका हुन र < पुर्कोट दहकी निर्मला दिदी जस्लाई यो सत्ताका तत्कालिन सिपाहिहरुले आफ्नै सहयोद्धाको अगाडि तड्पाई तड्पाई सामुहिक बलात्कार गरे र प्राण उडेर नजाँदै उनलाई नांगै पारेर बजारभरी लतार्दै घुमाएर परको बाँसघारीको झ्याङमा लगेर फालेका थिए । तिनकी आमाको अवस्था के छ भनेर एकमिनेट अडिएर हालखवर सोध्ने समय आज तपाईसँग किन हुन सकेन ।
मलाई घमिरका स्थानिय बासिन्दाले सुनाएका थिए । निर्मला दिदीले आन्तिम अवस्थासम्म पनि ति जल्लादहरुसँग आफ्नो प्राणको भिख मागिनन्। बरु घृणाले तिनीहरुलाई पिच्च थुकेकी थिईन्। आज उनको शहादतको १३ बर्षपछि तपाई हाम्रा यि घिनलाग्दा हर्कतहरु देखेर मलाई त लाग्छ उनले पिच्च थुक्दिहुन् । ति धोखेवाज सहयोद्धाहरुलाई सम्झेर। जस्ले उनिजस्ता हज्जारौं शहीदको आत्मालाई समेत धोका दिएको छ। आफ्नो बर्गलाई बिर्सिएर जनता भजाउने फोहोरी राजनितीमा आफूलाई र्चुलुम्म डुवाएको छ। आफ्नो गन्तब्य बिर्सिएर बाटोमा भोजभतेर मनाईरहेको छ।
दाजु, मलाई माफ गर्नुहोला। यदि मैले तपाईलाई बिझाउने त्यस्तो केही लेखेकी रहेछु भने। तर १० बर्षपछि यो बिरानो शहरमा तपाईलाई देखेर खुशी हुने, अपनत्वको भावना मनमा फुलाउने अधिकार पनि मसँग रहेनछ । हाम्रो त बर्ग नै फरक परिसकेको रहेछ । तपाई त अर्कै बर्गको मान्छे भईसक्नु भएको रहेछ । तपाईसँग केही आफ्ना कुराहरु राख्ने जमर्को गरेँ । तपाईले मेरो सारै चित्त दुखाउनुभयो । तर याद राख्नुस कुनै न कुनै दिन तपाईलाई आफ्नो गल्तिको महशुष जरुर हुनेछ ।
मलाई थाहा छ, मेरो यो चिठ्ठी तपाईलाई बकवास लाग्न सक्छ । तर मलाइ यो पनि थाहा छ । मुक्ति र परिवर्तनको अभिष्ट मनभरी सजाएर अझै पनि पार्टीको नेतृत्वले बर्गिय मुक्ति आन्दोलनको दिशाबोध गर्ने आशा मनभरी सजाएर बसेका अतृप्त आत्माहरुले मेरो यो पत्रको महत्वबोध पक्कैगर्नेछन्।
त्यस्ता क्रान्तिका ईमान्दार मसिहाहरु आज सडक गल्ली चाहारिरहेका छन् र एउटा त्यस्तो सुनौलो दिनको प्रतिक्षामा छन् जुन दिन उनिहरुको क्याप्टेनले जहाजलाई पुन सुचारु गर्नेछ। ज्वारभाटाहरुबाट बचाएर सुरक्षितसँग क्याप्टेनले सकुशल जहाजलाइ बन्दरगाहमा ओराल्नेछ र नयाँ जनबादी क्रान्तिको शंखघोष गर्नेछ। त्यो दिन तपाईजस्ता अवसरवादी पाखा लाग्नेछन् र क्रान्तिका असली सिपाही जहाजको अग्रमोर्चामा उभिनेछन् । हो म पनि त्यो दिनको पर्खाईमा छु।
मिती-2072-12-22 गते म‌ँगलवार
Posted by Aastha kc at 1:55 AM No comments:
पुग्नु त धेरै पर छ नि है!
हृदयको उदासीलाई शब्दहरूमा बेह्री पठाएको छु, खोलेर हेर ।
आज धेरै दिनपछि तिमीलाई पत्र लेख्न बसेको छु। मलाई थाहा छ, धेरै लेख्नु अहिले मेरो वशको कुरा होइन। मसँग लेख्नका लागि त्यस्ता अनुभूति नै कहाँ छन् र। सबै कोमामा गइसकेका छन्। जीवनका उदास क्षणहरूलाई शब्दमा उतार्नु पनि त निकै गाह्रो कुरा रहेछ। तर पनि तिमीलाई पत्र नलेखेका दिनमा मेरो मनमा तैरिएका भावनाको खात कतै पानीको फिंजझैं आकार ग्रहण गर्दै शून्यमा बिलाएका छन्। यो कुराको पीडा मलाई जीवनभर कतै न कतै त दुख्छ नि । त्यसैले सम्झिएको छु।
आखिर, अनेक झमेलाका बीच, अनेक सम्बन्धका बीच, अनेक आशा र निराशाको बीच तिमी पनि त मलाई सम्झिरहेकी हुन्छ्यौ। मैले कुनै दिन भनेको थिएँ, कसैको अँगालोमा रून मन लाग्छ भने त्यो नै सबैभन्दा प्रिय साथी हो। र, त्यो तिम्रो लागि म र मेरो लागि तिमी हौ। शायद, यो जीवनमा अब त्यस्तो साथी खोज्नुमा हामी जति भौंतारिए पनि पाउन सक्दैनौं।
यो भावनाको लागि तिम्रो र मेरो भोगाइ उस्तै उस्तै पाउँछु।कता–कता तिमीलाई भेटेपछि कति आँसु आँखाबाटै बिलाउँछन्। यो पनि त पीडा कम हुनुको उदाहरण हो। यदि उर्लिएरै आए पनि तिम्रो अँगालोमा आँसु बगाउनुमा मलाई कुनै दकस लाग्दैन। सायद, तिमीलाई पनि। यही अनाम सम्बन्धको धागोले त तिमी र मलाई जति टाढा–टाढा हुन खोजे पनि बाँधेर ठेगानामै ल्याइपुर्याउँछ। जति तर्की–तर्की हिँडे पनि तानी–तानी ल्याउँछ।
जतिसुकै फासलाको अनुभूति गरेर भेटिए पनि, जतिसुकै टाढापनको बरफ जमे पनि भेटेपछि बरफ पग्लिन्छ, जसरी हाम्रो हृदय पग्लिन्छ। एउटा अनुपम न्यानोपनले हामीलाई गाँजिदिन्छ र मुहारमा जतिसुकै कठोरताको अभिनय गरे पनि मनको मैन यसरी पग्लिन्छ कि छुट्टिने बेलासम्ममा त्यसले हाम्रो मुहारमा केही न केही उज्यालोको प्रतिप्ति छोडेर गइजान्छ।यस्तो अनुपम अनुभूति जो कोहीसँग महसुस कसरी होस्।
तिमीलाई हेर्छु, तिमीले आँखामा सपनालाई उसैगरी जोगाइरहेकी छौं। सपनाको यो चरम खडेरीमा त त्यही सपनाको गुल्गार हेर्नका लागि पनि तिमीलाई भेट्न लालायित भइदिन्छ। निश्चलता त तिम्रो अनुपम सम्पत्ति नै भइरह्यो। तिमी सम्पत्तिहीन छौं, म पनि उस्तै छु। तर यो निश्चलताको सम्पत्ति त हामीले जोगाइराखेका हुँदारहेछौं।
जतिसुकै खर्च गर्न खोजे पनि नसकिने सम्पत्ति यही नै त रहेछ हाम्रो। त्यही सम्पत्तिमा धनी महसुस गरेर म तिम्रा कोमल औंला सुम्सुम्याउँछु। चुम्बन गर्छु र आफूलाई कतै न कतै जीवित पाउँछु। सायद, यो पनि हाम्रो साझा भावना हो।
मैले पहिले नै भनिसकेको छु कि धेरै लेख्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर पनि केही न केही लेख्नुको उत्प्रेरणा मभित्र जागेको छ। त्यसैले लेखें। यसले कुनै ‘पज’ भएको संगीत फेरि ‘रिज्युम’ हुनेछ। तिम्रो पत्रको हरदम अपेक्षा गरिरहेको हुन्छु। र, अन्तिममा, तिमीलाई एउटा गाढा चुम्बन पठाइदिएको छु। अब फेरि हाम्रो सम्बन्धको नयाँ आयाम सुरु भएको छ, पुग्नु त धेरै पर छ नि है!
Posted by Aastha kc at 1:11 AM No comments:
आफ्नै गन्थन (साहित्य, राजनीति, जीवन आदि/इत्यादि)
प्रस्तुतिः भुवन देवकोटा आस्थाजी आरामै ? हजुर आरामै छु । के काममा ब्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि ? प्रलेस ...
तिजको साँस्कृतिक आधार नै महिला बिरोधी छ
आस्था केसी ...
आज शहरमा हल्लीखल्ली छ चारैतिर भेला छ बैठक छ तालिम छ र गोष्ठी पनि छ सदियौं पुराना अवशेषहरु मेटाउन आत्मसम्मान र स्वाभिमानको जग बसाल्न...
स्मृतिमा निर्मला दिदी
आस्था केसी ‘नानु सञ्चै छौ ?’ मंसिरको चिसो सिरेटोसँगै कसैले मेरो हात समात्यो । को होला ? मनमनै सम्झिन खोजें र आवाज...
हामीले हात मिलायौं
-[आस्था केसी] हावा जोड–जोडले चलिरहेछ । यो मौसम नै हावाहुरीको मौसम हो । स–साना रुखहरु हावाको झोक्क...
किन किन यो मनमा भित्रै देखी थकान छ । तिमी छैनौ र त यहाँ सब थोक सुनसान छ ।। भन्नु केही पनि थिएन,जब तिमी नजिकै थियौं । टाढा छौ आज र त...
आस्था केसी जीन्दगीका दोभानहरु देखिएकै हो समयका दोसाँधहरु टेकिएकै हो एउटा साँघुरो गल्लीबाट छामछाम...
जनयुद्धमा लागेकी बहिनीलाई दाजुको चिट्ठी
प्यारी बहिनी आस्था, हृदयदेखिको मायासहित क्रान्तिकारी अभिवादन आराम छु अनि सोही कामना गर्दछु । पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको ला...
तिज पर्बलाई भड्किलो र बिकृतिजन्य बन्न बाट रोक्नको लागी सबैजना जिम्मेवार बन्नु आबश्यक छ ।
सपनाहरुको बस्ती आस्था केसी सपनाहरु बिस्कुन जस्तै छरपष्ट छरिएका छन् । बिपनाहरु भर्खरै प्रेम ट...
रेखाले आर्यनसँग मागिन्– औंठी चिनो देऊ